डा. गोविन्द केसीको नाम लिदै उपकुलपतिले गीत गाए, ‘जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई भेट्न मन लाग्छ’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्वार्ता / विचार ∕ डा. गोविन्द केसीको नाम लिदै उपकुलपतिले गीत गाए, ‘जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई भेट्न मन लाग्छ’
डा. गोविन्द केसीको नाम लिदै उपकुलपतिले गीत गाए, ‘जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई भेट्न मन लाग्छ’
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ असार १६ गते, १९:०६ मा प्रकाशित
प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ,
आज मेरा लागि असाध्यैं खुसीको कुरा इस्न्टिच्युट अफ मेडिसिनसँग लामो अन्तक्रिया, लामो सहकार्यपछि उत्पादनशील कामको सिलसिलामा महत्वपूर्ण प्वाइन्टमा हामी आइपुगेका छौं । वास्तवममा भन्नुपर्दा यो अहिलेसम्म दन्त चिकित्सा पढाउन निजी कलेजलाई हामीले दिएको सम्बन्धन त्रिविको नीति विपरीत थियो । हामी आफूले नचलाएको प्रोग्राममा अरुलाई सम्बन्धन दिदैंनौ भन्ने नीति थियो । तर, हामीले दिइरहेका थियौं । अर्को कुरा के आउँथ्यो भने आफू पनि चलाउन नसक्ने अरुलाई पनि चलाउन नदिने प्रश्न बारम्बार आइरहन्थ्योे । पोलिसीमै केही त्रुटीपूर्ण थियो कि ? किनभने, आफू पनि नगर्ने अरुलाई पनि नदिने भएपछि विरामी उपचार गर्न कहाँ जाने ? यक्ष प्रश्न थियो । कि त हामीले नीति परिर्वतन गर्नुपथ्र्यो या केही व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । समयमा नभएता पनि अहिले आएर खोलिएको छ । यो हामी सबैको निम्ति असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो । विडिएसको कार्यक्रम संचालन हुँदै डेन्टल टिचिङ्ग अस्पतालको उद्घाटन गर्न पाउँदा ज्यादै खुशी लागेको छ ।
म सधै रियलनेसको कुरा गर्छु । हामीले नगर्दा अरुले नगर्ने पनि हैन्, अरुले नगरेको पनि हैन । हामी चार वर्ष पहिले आउँदै गर्दा (त्रिभुवन विश्वविद्यालय र इस्न्टिच्युट अफ मेडिसिनका पदाधिकारी) जुन प्याकेज बुझेका थियौं । त्योभन्दा अझ राम्रो बुझाउन सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने नै हाम्रो मुल्यांकन हो । हामीले बुझेको भन्दा त्यो भन्दा राम्रो बुझाउनुपर्छ । तर, यही अन्त्य हो भनेर हामी भन्न सक्दैनांै । त्यसकारण तपाईंहरुसँग म के कुरा रिभ्यु गर्न चाहन्छु भने हामी चार वर्ष अगाडि आउँदा अहिलेको इन्स्च्यिुट अफ मेडिसिनको स्टाटस के हो एचिभमेन्ट के हो ? यसबाट के उपलब्धि हासिल भयो ? त्यो सबै समीक्षा गर्न म तयार छु । समीक्षा गर्न चाहन्छु पनि ।
‘जुन मायाले धरधरी रुवायो, उही मायालाई भेट्न मन लाग्छ’
किनभने, म वास्तवमा शरीरमा कमजोर दाँत र सीप, कला, क्षमतामा कमजोर नाच्न र गाउनमा हो । तथापि मलाईं त्यो एउटा गीत याद आइरहन्छ । ‘जुन मायाले धरधरी रुवायो, उही मायालाई भेट्न मन लाग्छ’ हाम्रो सम्बन्ध र आइओएमको सम्बन्ध पनि त्यही नै हुँदै आएको छ । किनभने, हामी र आइओएमबीच द्वन्द्व पनि भइरहे । यो कुरा डा. गोविन्द केसीको नाम लिए पनि नलिएपनि प्रस्टै छ । उहाँ एउटा उत्कृष्ट फ्याकल्टी हो । यतातिर अहिले म जान चाहन्न । तर, यो पनि सत्य हो सबैभन्दा बढी क्रियाकलापमा संलग्न भएको, उपलब्धि हासिल गर्ने र जहाँ गएपनि देखाउने आइओएममा नै हो । त्यही भएर एउटा द्वन्द्वमा हाम्रो सम्बन्ध विकास भएको हो । सबै द्वन्द्वलाई हामीले उत्पादनशीलतामा बदलेका छौं । हाम्रा सबै द्वन्द्वहरु लोजिकल इन्ड भएका छन्, आइओएमको हितमा भ्रएका छन् । यसको विकासको निम्ति, प्रगतीको निम्ति, कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा गरेका छौं । यी सबै हाम्रो व्यक्तिगत लाभको लागि हैन । आइओएमका विकास होस् भनेर कयौ ठाउँमा कम्प्रोमाइज ग¥यौ । कति ठाउँमा असहमति जनाएर पनि निर्णयमा सहमतिमा गएका छौं ।
गर्वका साथ म भन्छु नौ वटा डिन कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी क्रियाकलाप यही भएका छन् । अहिले हामी आफैं आएका होइनौं, उहाँहरुले बोलाएर आएका हौं । अहिले पनि सबैभन्दा बढी काम भएको छ भने यही भएको छ । चाहे कार्डियोथेरासिसको भवनको कुरा गरौं, चाहे मेडिसीन क्याम्पसको भवनको कुरा गरौं । चाहे अन्य क्रियाकलापको कुरा गरौं । जे नै भएपनि अहिले सिंगो त्रिविले गर्व प्रगति देखाउने र रेफर गर्ने ठाउँ यही नै छ । त्यसले गर्दा हामीले भन्ने गरेका छौं— हाम्रो त्रिविको इतिहासमा र अहिलेको परिपेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रि रुपमा देखाउने शीरको रुपमा रहेको छ । अब यो रत्न बन्न चाहन्छ भने त्यसका लागि पनि हामी तयार छौं । तपाईंहरुले गरेको काम उत्कृष्ट छ । त्यो मैले भन्नै पर्दैन । सारा संसारले जान्दछ । सँगसँगै हामीले यो कुरामा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईंहरुको फुल पोटानसियल फुल कन्फिडेन्ट प्रयोग भएको छ त ? त्यो चाहिँ तपाईंहरु आफैले रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्छु म । मैले युरोपको युकेबाट पिएचडी गरे । त्यसपछि पनि केही काम गर्न गएँ । त्यहाँका युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरु सोसलाइजेसनमा बसेपछि गफ गर्दै भन्छन्— हामी युरोपबाट अफ्रिका चलाउँछाै । त्यो भनेको के भने उनका युनिभर्सिटीका पिएचडी मास्टर्स त्यहाँका प्राइमिनिस्टर र प्रेसिडेन्ट हुन्छन् । एउटा प्रोफेसर त्यहाँ जाँदा एयरपोर्टबाटै रातो कार्पेट बिछाएर अमेरिकी राष्ट्रपतिजस्तो सम्मान हुन्छ ।
१०० सिट किन बनाउनु हुन्न ?
मैले भन्न खोजेको के भने अहिले देशको बजेट बनाउनेदेखि लिएर देश चलाउने धेरै नेता तपाईंहरुको प्यासेन्ट हुनुहुन्छ । त्यसलाई तपाईंहरुले बढाउनुभयो भने के पाउनुहुन्न । ती प्यासेन्ट विरामी मात्र हैन कि सन्तुष्ट भएर गएका साथीहरु हुन् । उनीहरु अहिले निर्णयकर्ता भएकाले उनीहरुबाट सोर्स निकाल्न क्षमता प्रस्तुत गर्नुभयो भने आइओएमको अवस्था यस्तोमात्र हुँदैन धेरै माथि हुन सक्छ । मैले रेफर गर्न खोजेको के भने मलाई बीचमा डिनज्यूले डेन्टल स्थापना गर्न टेक्नोलोजी लगाउनुभयो । त्यसैगरी एमबीबीएसको ७६ सिटलाई १०० सिट किन बनाउनु हुन्न । १०० सिट बनाउँदा के बिग्रन्छ ? जानकीलाई तपाईंहरुकै सिफारिसमा हामीले ५० सिट दिन हुने । अरु मेडिकल कलेज १ सय ५० बाट १०० मा आएका छन् । तपाईंहरुकै सिफारिसमा भएको छ भने त्यही चिज तपाईंहरु १०० मा जान सक्नुपर्ने हो । सायद हामी नन-मेडिकल भएर त्यो अपेक्षा राखेका हौं कि । मेडिकल साइन्सका विद्धानहरु यो तपाईंहरुको सीमा भित्र पर्दछ । मेरो दृष्टिकोणमा आईओएम आज यो पोटानसियालिटी, यो डेलिभरी र देशभरिको यो कमाण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पाएको रिकगनाइजेसन नै काफी छ भन्ने लाग्छ । मलाई थाहा छैन ७६ बाट १०० पुग्दा के हुन्छ ? मलाई के थाहा छ भने यो हाम्रो आईओएममा त्यो पोटेन्सियल छ, किन गरिराखेका छैनौँ?
शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्नुपर्छ
विपीमा विदेशी विद्यार्थीलाई धेरै सिट दिइयो भनेर विरोध भएको छ । मेरो कसैलाई समर्थन र विरोध हैन । अहिले सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रियकरण भैसकेको छ । हामीले स्वदेशीलाई कति सिट दिएर विदेशीलाई कति दिन सकिन्छ ? हाम्रो शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय करण त गर्नै प¥यो नि । नेपाल एकातिर विदेशमा विद्यार्थी पठाउने एक नम्बरमा छ । अनि बाहिरबाट एकजना पनि नआइज भन्नु हामी कहाँ छौ त ? मेडिसीनमा नआइज भन्ने इन्जिनियरिङमा नआइज भन्ने अनि के टिचर ट्रेनिङ्गमा आइज भन्ने त ? मेरो प्रश्न के हो भने कति सिट बढाउनुपर्छ ? त्यसका लागि कहाँ जाने हो ? हामीमा के कमजोरी छ । फिजिकल हो या इक्युप्मेन हो या रिसर्चमा जानुपर्ने हो जाउ । मलाई लाग्छ तपाईंहरु जस्तो वेस्ट एसएलसी, वेस्ट आइएसी, वेस्ट एमबीबीएस, वेस्ट स्पेसलिष्ट र समाजकै वेस्ट जनशक्ति भएको यो ठाउँमा तपाईंहरुको तर्फबाट अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भने सायद समाजप्रति हामी जिम्मेवार भएको महसुस हुन्छ होला । यसमा हामीले गर्न सक्ने कन्ट्रीब्युसनमा हामी सधैं तयार छौं ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपती खनियाँले सोमबार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जको बिडिएस शैक्षिक कार्यक्रम तथा दन्त चिकित्सा शिक्षण अस्पतालको उद्घाटनका क्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)